महिलाहरुलाई कुन समयमा से’क्स गर्न बढी चाहना हुन्छ ? विस्तृत विवरणसहित – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / महिलाहरुलाई कुन समयमा से’क्स गर्न बढी चाहना हुन्छ ? विस्तृत विवरणसहित
admin August 9, 2021	स्वास्थ्य Leaveacomment 827 Views
चाहना बढी र इ’च्छुक हुन्छन् ? जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनले गरेको एक अध्ययनकाअनुसार महिनावारी भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलाहरुलाई से’क्सको चाहना बढी हुन्छ । यो अवधिमा महिलालाई सह’वासमा बढी आनन्द आउँछ। बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवतीमा गरेको सर्वेक्षणपछि उक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
Previous नेपालमा बनेको मा’र्सी बि’यर अब मा र्सी प्रिमियम, मार्सी स्ट्र’ङ्ग र मार्सी झ्या’प गरी तीन प्रकारमा सर्वत्र उपलब्ध
Next ओलीले गाए बैठकमा गीत, ‘भत्काइदेऊ धरहरा, पुरिदेऊ रानीपोखरी, टालिदेऊ मेलम्ची, भत्काइदेऊ सडक पुल र विमानस्थलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू’